आमा खोज्दै रुन्छन् जिउँदै ‘जला”इएकी’ राजकुमारीका छोराछोरी ! - ABNews Nepal
आमा खोज्दै रुन्छन् जिउँदै ‘जला”इएकी’ राजकुमारीका छोराछोरी !
Feb 18, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, dhamala ko hamala, headline nepal, katathmandu news, latest khabar, latest nepal, latest news chitwan, latest newsn nepal, latest ramailo samachar, nepal update, taja khabar, taja khabar nepal, tajakhabar
पेट्रोल छ’र्केर आ गो लगाइएकी सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका–१ धनगढीकी राजकुमारी साहको उपचारको क्रममा शनिबार राति मृ”त्यु भयो । राजकुमारीको मृ”त्युपछि उनका आठ वर्षका छोरा जितेन्द्र किरिया बसेका छन् । दा’गबत्ती पनि उनैले दिए जितेन्द्र आमा खोई भन्दै रोइरहन्छन् । एलकेजीमा अध्ययनरत जितेन्द्रलाई उनकी आमाले हरक्षण ख्याल राख्थिन् । बिहान उठाउने, नित्यकर्म गराउने, कपडा लगाइदिने र खाना खुवाउने स्कुल पठाउने काम आमाले नै गरिदिन्थिन् । राति आमासँगै सुत्थे उनी ।
सेतो वस्त्र अनि हातमा हरियो बाँसको करची बोकेका यी बालक देख्दा मृ तकको घरमा आउने आफन्त र छिमेकी धेरैलाई रुवाउँछ । राजकुमारीकी दुई वर्षकी छोरी पनि छिन् । ‘छोरा र छोरी दुबैले आमा कहाँ छ भनेर सोधिरहन्छन्’ राजकुमारीका पति रवीन भन्छन्, ‘बच्चाको रुवाइले मलाई पनि रुवाएको छ । रवीन अब छोराछोरीको लालनपालन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । ‘म बाहिरको काम गर्दा उनले घरको सबै काम सम्हाल्थिन्’ उनी भन्छन्, ‘उनले घरमै कपडा सिउने काम पनि गर्थिन् ।
हामी खुशी–खुशी जीवनयापन गर्दै आएका थियौं । आफू काम विशेषले बोदे बर्साइन बजार गएको अनि आमा नजिकैको बारीबाट पराल लिन गएको बेला भाइ परमेश्वरले राजकुमारीलाई जलाएर भागेको उनले बताए । सुरुमा उसले ला गूऔ षध पनि प्रयोग गथ्र्यो, तर बीचमा छाडेको थियो । त्यही भएर बिहे पनि गराइदिएँ’ उनी भन्छन्, ‘सुध्रेको जस्तो लागेको थियो । तर यस्तो घटना भयो । २१ माघको बिहान घरमा रोटी पकाइरहेको बेला २० बर्षीय परमेश्वरले २७ बर्षीया राजकुमारीको शरी रमा पेट्रोल छ र्केर आ गो लगाएका रविनले बताएका छन् । परमेश्वर हाल फ रार छन् ।
राजकुमारीको ज ला एर ह -त्या गरेको घ टनाको राष्ट्रिय महिला आयोगले अनुगमन गरेको छ । घट नाको जानकारी पाएपछि आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली नेतृत्वको टोलीले मृ तकको घर बोदे बर्साइन नगरपालिका–१ धनगढी स्थलगत जानकारी लिएको छ । टोलीले घट’नाबारे मृ तकका पति रबिन र परिवारका अरु सदस्यसँग कुराकानी गरेका छन् । अध्यक्ष पराजुलीले घ टनाबारे जानकारी लिँदै दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । अनलाइनखबरबाट
यस्तै,लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो पटक सवारी लाईसेन्सका लागि अत्याधुनिक ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ । बुटवल १३ मा २ विघा जग्गा ब्यवस्थापन गरी ट्रायल सेन्टरमा सञ्चालमा आएको हो । एकै पटकमा १ हजार भन्दा बढीले ट्रायल दिन सक्ने क्षमता सहितको ट्रायल सेन्टर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ । प्रदेश सरकारले ट्रायल सेन्टर यातायात तथा सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयलाई हस्तानान्तरण गरेको बताउँदै उनले कार्यालय पनि ट्रायल सेन्टरको कम्पाउण्डैमै रहेकाले नेपाल कै नमुना भएको बताए ।
एकै दिन करिब ८ सय मोटरसाईकल तथा चार पांग्रे २०० सवारी साधनको लाईसेन्सका लागि ट्रायल लिन सकिने क्षमता रहेको यातायात तथा सवारी चालक अनुमति पत्र रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादबले जानकारी दिए ।